Waagii Hore, Hadda, iyo Mustaqbalka Saamaynlaha Muuqaalka Suuqgeynta | Martech Zone
Tobankii sano ee la soo dhaafay ayaa u adeegay sidii mid ka mid ah koboca weyn ee suuq-geyntooda, iyaga oo u dejinaya sidii istaraatijiyad ay qasab ku tahay in ay yeeshaan sumadaha dadaalka ay ugu jiraan in ay la xiriiraan dhagaystayaashooda muhiimka ah. rafcaankeedana waxaa lagu wadaa inuu sii jiro iyadoo magacyo badan ay eegayaan inay la shuraakoobaan saameeyayaasha si ay u muujiyaan runnimadooda.
Kor u kaca ganacsiga e-commerce ee bulshada, dib u qaybinta kharashaadka xayaysiisyada si ay saamayn ugu yeelato suuqgeynta telefishanka iyo warbaahinta khadka tooska ah, iyo kordhinta qaadashada software-ka-hortagga ah ee horjoogsada xayeysiisyada khadka tooska ah ee soo jireenka ah, la yaab maaha:
Suuqgeynta saameeyayaasha ayaa la filayaa inay soo saarto $22.2 bilyan adduunka oo dhan 2025, ilaa $13.8 bilyan sannadkii hore.
Gobolka Maraykanka ee Saamaynta Suuqgeynta, HypeAuditor
In kasta oo, caqabaduhu ay ka dhex abuurmaan suuq-geynta saamaynta leh maaddaama muuqaalkeedu uu si joogto ah isu beddelayo, taas oo adkeynaysa summadaha, iyo xitaa kuwa saameeya laftooda, si ay ula socdaan hababka ugu fiican. Taasi waxay hadda ka dhigaysaa wakhtiga ugu habboon ee lagugu soo hoydo waxa shaqeeyay, waxa aan shaqayn, iyo waxa mustaqbalka ololeyaasha wax ku oolka ah u egyahay.
Mustaqbalku waa Nano
Markaan qiimaynayno cidda samaysay mowjadaha sannadkii ina dhaafay, xaqiiqadu waxay ahayd mid naxdin leh kuwa aan wax suuq-geyn ama suuqgeyneedba si isku mid ah. Sannadkan, dunidu aad ayay uga walaacsanayd magacyo waaweyn sida The Rock iyo Selena Gomez - waxay ku hagaajiyeen saameeyayaasha-yar-yar iyo nano-saameeyayaasha.
Saamayn-bixiyeyaashan, oo leh inta u dhaxaysa 1,000 iyo 20,000, waxay awood u leeyihiin inay gaadhaan bulshooyinka niche, iyaga oo u adeegaya kanaalka ugu wanaagsan ee summadaha si ay u gaadhaan qayb gaar ah oo dhegaystayaashooda ah. Ma aha oo kaliya inay ku xidhi karaan kooxaha iska indha-tiraya suuq-geynta dhaqameed, laakiin heerarka hawlgelinta (ERs) way ka sarreeyaan. 2021, nano-saamaynayaashu waxay lahaayeen celcelis ER ee 4.6%, in ka badan saddex jeer kuwa saameeyayaasha leh in ka badan 20,000 oo raacsan.
Awoodda saamaynta yar-yar iyo nano-saamayn-bixiyeyaasha kama aysan baxsanin suuq-geynta iyo sida calaamaduhu u raadiyaan inay kala duwaneeyaan istiraatiijiyadooda warbaahinta bulshada oo ay ka faa'iidaystaan ​​​​ER-yada sare ee ololayaasha socda, waxaan arki doonaa kuwan saamaynta leh oo helaya caan ka sii badan.
Wershadaha Suuqgeynta ee Saamayntu way sii socotaa inay qaangaadhaan
Si gaar ah sidoo kale, xogta ayaa muujisay in celceliska da'da isticmaalayaasha warbaahinta bulshada ay kor u kacday sanadkii la soo dhaafay.
Boqolkiiba isticmaaleyaasha barta Instagram ee da'doodu u dhaxayso 25 iyo 34 ayaa kor u kacay 4%, halka tirada isticmaaleyaasha TikTok ee da'doodu u dhaxayso 13 ilaa 17 ay hoos u dhacday 2%.
Isticmaalayaasha TikTok ee da'doodu u dhaxayso 18 iyo 24 ayaa ka dhigay kooxda ugu badan ee isticmaalayaasha goobta, 39% dhammaan isticmaalayaasha.
Dhanka kale, 70% isticmaalayaasha YouTube waxay da'doodu u dhaxaysay 18 iyo 34 sano jir.
Dhaqdhaqaaqa daawadayaasha qaangaadhka ah ee wajahaya xaqiiqooyinka miyir-qabka leh ayaa ka muuqatay maaddooyinka raacdadooda la raadiyay. Iyadoo isticmaalayaashu ay sii wadeen inay ku soo qulqulaan Instagram-ka Beyonce iyo Kardashians, cilmi-baaristu waxay muujineysaa in Maaliyadda & Dhaqaalaha, Caafimaadka & Daawada, iyo Ganacsiga & Xirfadaha ay ahaayeen qaybaha soo jiidashada ugu badan. taageerayaasha cusub in 2021.
Korsashada Koritaanka, Hal-abuurka, iyo Metaverse waxay u qaadi doonaan Suuqgeynta Saamaynta Heerka Xiga
Warshadaha suuqgeyneed ee saameeyay sanadka 2022 aad ayay uga casrisan yihiin sidii ay ahaan jireen masiibada ka hor, daneeyayaashana waxay qaateen ogeysiis. Saamayn-bixiyeyaashu hadda waa qayb weyn oo ka mid ah buugaag-ciyaareedka suuq-geynta, mana aha oo keliya mashaariicda hal-mar ah ee caan ahaa dhowr sano ka hor. Noocyada ayaa si sii kordheysa u raadinaya iskaashi joogto ah oo lala yeesho dadka saameeya.
Dhanka kale, goobaha warbaahinta bulshada ayaa siinaya hal-abuurayaasha qalab cusub iyo habab badan oo dakhli lagu soo saaro. 2021, Instagramku wuxuu ku daray dukaamada abuuraha, qaabdhismeedka heshiisyada xayeysiinta cusub, iyo hagaajinta suuqa saamaynta leh si looga caawiyo summadaha inay ku xidhmaan isticmaaleyaasha. TikTok waxay bilawday tilmaamo fiidiyoow ah iyo hadiyado macmal ah, iyo sidoo kale awooda qulqulka tooska ah. YouTube-na waxa ay daaha ka rogtay $100 milyan oo Sanduuqa Gaaban si ay ugu dhiirigeliso dadka saamaynta ku leh inay u abuuraan nuxur jawaabteeda TikTok.
Ugu dambeyntiina, wax iibsiga onlaynka ah ayaa la kulmay korriin saadaasha hawada ah intii lagu jiray masiibada, laakiin…
Ganacsiga bulshada ayaa la filayaa inuu saddex jeer si degdeg ah u koro, ilaa $1.2 tiriliyan marka la gaaro 2025
Waa maxay sababta wax iibsiga loogu dejiyay Kacaan bulsho, Accenture
Goobaha warbaahinta bulshada ayaa soo bandhigaya isdhexgalka e-commerce, sida Dhibcaha Instagram iyo Iskaashiga TikTok ee Shopify, si loo fududeeyo loogana faa'iidaysto dabaylahaas.
Dhawrkii sano ee la soo dhaafay waxay caddeeyeen saameeyayaasha warbaahinta bulshada inay yihiin kheyraad qiimo leh, taasoo lama huraan ah u horseedaysa horumar ka tagaya warshadaha si wanaagsan u meel marin waxa soo socda. Taasi maxaa soo socda waxay u badan tahay inay noqoto kobaca iyo qaadashada xaqiiqada la kordhiyey iyo metaverse.
Qaadashada suuq-geynta saamaynta leh ee laba cabbir ilaa saddex waxay noqon doontaa fursadda weyn ee soo socota, sida ay caddaynayso istiraatijiyadda Facebook ee isbeddelka ah ee diiradda saaraya dhammaan waxyaabaha Meta. Qalad ha samayn, waxay sidoo kale soo bandhigi doontaa caqabado badan. Dhisidda iyo wadaaga khibradaha immersive waxay la macno noqon doontaa qalooca waxbarasho ee weyn ee saameeyayaasha farsamada. Laakin marka la eego sida ay warshadu uga soo gudubtay masiibada iyo awooda xad dhaafka ah ee ay noqonayso, waxaanu ku kalsoonahay in dadka saameeyay ay caqabadaas gaadhayaan.
Soo deji HypeAuditor's Warbixinta Suuqgeynta Saamaynta ee Maraykanka 2022
Tags: AccentureHeerka hawlgalkahanti dhawrkawaayo-aragnimo quus ahsuuqgeynta suuqgeyntaInfluencer in industry marketingmuuqaal suuqgeyneed saamayn ku lehsaamaynta marketing statisticssaamaynta marketing statsInstagraminstagram hoos u dhacagoolsad -bursimicro-saameyn-yarenano-saamaynSelena Gomezdukaankaganacsiga bulshadawarbaahinta bulshadakacdoon bulshodhagaxiiTikTokyoutube